အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Yellow fever vaccine)သည် အဝါရောင်အဖျားရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဝါရောင်အဖျားရောဂါသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အာဖရိကနှင့် တောင်အမေရိကတိုက်တွင် အဖြစ်များသည်။ ဆေးထိုးပြီးတစ်လအတွင်းတွင် (၉၉)ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ ခုခံအားဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဘဝတသက်လုံးစာ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကူးစက်ရောဂါများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကြွက်သား သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်သို့ ထိုးနှံရသည်။
အဝါရောင်အဖျားရောဂါအဖြစ်များသည့်နေရာများတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို ပုံမှန်ထိုးသင့်သော ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသက်(၉-၁၂)လအတွင်းတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ထိုးပေးရသည်။ အဝါရောင်အဖျားရောဂါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောနေရာသို့သွားမည့် ခရီးသည်များသည် ဤကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သည်။ တစ်ကြိမ်သာ ပေးရန်လိုအပ်ပြီး နောက်ထပ်ထိုးပေးရန် လိုအပ်လေ့မရှိပါ။
အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV) ကူးစက်ခံနေရသောသူများတွင် ရောဂါလက္ခဏာမပေါ်သေးပါက ပေးနိုင်သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျဉ်ခြင်း၊ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျဉ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်းနှင့် ယားယံ၍ အင်ပြင်ထွက်ခြင်းစသည့် မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်တတ်သည်။ လူတစ်သန်းတွင် (၈)ယောက်ခန့်မှာ ပြင်းထန်သော ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှု၊ (၄)ယောက်ခန့်မှာ ပြင်းထန်သောအာရုံကြောပြဿနာများနှင့် (၃)ယောက်ခန့်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းခြင်း(organ failure)တို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တွင်ပေးလျှင် စိတ်ချရနိုင်ခြေရှိသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိပါက ဤကာကွယ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ခံအားအလွန်ကျဆင်းနေသူများတွင် မပေးသင့်ပါ။
အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေးကို (၁၉၃၈)ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ် ဆေးတစ်လုံး၏ လက်ကားဈေးမှာ (၄.၃၀-၂၁.၃၀)ဒေါ်လာခန့်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၅၀-၁၀ဝ)ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသက်ရှိသေးသော်လည်း အားပျော့သည့် အဝါရောင်အဖျားရောဂါပိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Vaccines and vaccination against yellow fever. WHO position paper -- June 2013." (5 July 2013). Releve epidemiologique hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly epidemiological record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations 88 (27): 269-83. PMID 23909008.
↑ "Yellow Fever Vaccine Booster Doses: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, 2015." (19 June 2015). MMWR. Morbidity and mortality weekly report 64 (23): 647-50. PMID 26086636.
↑ Yellow Fever Vaccine (December 13, 2011)။ 15 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Norrby E (November 2007). "Yellow fever and Max Theiler: the only Nobel Prize foravirus vaccine". J. Exp. Med. 204 (12): 2779–84. doi:10.1084/jem.20072290. PMID 18039952. PMC:2118520.
↑ Vaccine, Yellow Fever။6December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hamilton၊ Richart (2015)။ Tarascon Pocket Pharmacopoeia 2015 Deluxe Lab-Coat Edition။ Jones & Bartlett Learning။ p. 318။ ISBN 9781284057560။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဝါရောင်အဖျားရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=289769" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၀၈:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။